သင်၏ Thrive Life အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစားရန်နည်းလမ်းများ - အကောင်းဆုံး Freeze အခြောက်စားနပ်ရိက္ခာကြီးထွားလာ
a Comment ချန်ထား	/ အကောင်းဆုံးအေးခဲခြောက်အစားအစာ / အားဖြင့် အဒ်မင်
ဒါဟာပိုပြီးသစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစာစားခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်သောယေဘုယျအသိပညာဖြစ်ပါတယ်. သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုရှင်သန်စေပါ, antioxidants နှင့်ပြည့်ဝ၏, ဗီတာမင်, ပိန်ပရိုတိန်း, ဖိုင်ဘာ, နှင့်အကြီးအနိမ့်ကယ်လိုရီမုန်ဖြစ်ကြသည်. သင်၏အစားအစာတွင်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပိုမိုထည့်သွင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အကြံပြုချက်များရှိပါသည်.
အသုပ်များစားခြင်းသည်အစိမ်းရောင်အရွက်များသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုပိုမိုစားသုံးရန်လွယ်ကူပြီးတတ်နိုင်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်, အဖြစ်များစွာသောအခြားသူများ, ထိုကဲ့သို့သောခရမ်းချဉ်သီးအဖြစ်, သခွားသီး, ကြက်သွန်နီ, တရုတ်နံနံ, မုန်လာဥ, နှင့်ပိုပြီး. ဒါပေမယ့်ဆေးကြော, ခြောက်သွေ့, နှင့်ရှည်လျားသောနေ့ရက်ကာလအပြီးဆလတ်ဖြတ်ရိုးရှင်းတဲ့ပန်းကန်များအတွက်အလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်.
ဒါကြောင့်ရှင်သန်နေသောဘဝသည်ဤရိုးရှင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်. အေးခဲနေသောအခြောက်လှန်းထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုဆေးကြောရန်မလိုအပ်ပါ, အခွံ, ခုတ်, သို့မဟုတ်အရည်ပျော်.
ဒီတော့, သင်စတိုးဆိုင်မှအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို crisper ထဲပစ်ထည့်မည့်အစား, ပြင်ဆင်မှုအတွက်မလိုအပ်ပါ. အေးခဲနေသောအခြောက်ခံပစ္စည်းများကိုသင်အသုံးပြုလိုပါကအမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ရှိသည်.
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပတ်လည်တွင်သင်၏အစားအစာများကိုစီစဉ်ရန်ကြိုးစားပါ. လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံကိုသင်၏အစားအစာ၏အခြေခံလုပ်ပါ. အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအပိုင်းကို ဖြတ်၍ လမ်းလျှောက်ပါ… ကြက်သား, အမဲသား, ဝက်သားသို့မဟုတ်အညိုရောင်ဆန်, ချိုသောအာလူးသို့မဟုတ်ဂျုံခေါက်ဆွဲ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ခန်းကိုကြည့်ပါ. Thrive Life ထုတ်ကုန်များသည်ချွေတာရုံမျှသာဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကပိုကောင်းတဲ့အရသာရှိပြီးပိုကျန်းမာတယ်, သူတို့သည်အေးခဲနေသောအခြောက်များဖြစ်သောကြောင့်တာရှည်ခံ။ ဆေးမပါဘဲလတ်ဆတ်သောနေအိမ်များဖြစ်သည်! ရှင်သန်နိုင်သည့်သက်တမ်းသည်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်6နှစ်ပေါင်း 20 နှစ်ပေါင်း! မင်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မင်းကြည့်ရတာကောင်းတယ်, ၎င်းတို့အားအစာနည်းသောအသားများ (သို့) သင်လိုချင်သည့်ကောက်ပဲသီးနှံများဖြင့်ဟင်းပွဲများတွင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုစဉ်းစားပါ.
သင်၏နံနက်စာတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို“ အစိမ်းရောင်ဖျော်ရည်” ဖြင့်ခူးဆွတ်ပါ. သငျသညျဆလတ်ကဲ့သို့ပျော့အရသာဟင်းသီးဟင်းရွက်များထည့်နိုင်ပါတယ်, ဟင်းနုနွယ်ရွက်သို့မဟုတ် alfalfa အစာအာဟာရပိုသုံးရန်သင့်ဖျော်ရည်များသို့အပင်ပေါက်သည်, သိပ်အရသာပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ.
အေးခဲနေသောအေးခဲနေသောအအေးခန်းများကိုလက်တစ်ဆုပ်စာ omelet သို့ထည့်ခြင်းသို့မဟုတ် oatmeal သို့သီးများထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏အစားအစာတွင်အထွက်တိုးရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။.
spaghetti ငံပြာရည်သို့ mashed မုန်လာဥနှင့်ဖရုံသီးထည့်ပါသို့မဟုတ်အဆီနည်းသောဒိန်ချဉ်နှင့်ဖျော်ရည်ပြုလုပ်ပါ, သီးသီးအေးခဲ, ရေခဲမုန့်, နှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်သခွားသီးကဲ့သို့အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ. (ကလေးတွေသောက်ပြီးသူတို့ကဂေါ်ဖီထုပ်ကိုဘယ်တော့မှမစားဘူး! နွေရာသီလများအတွင်းအစာဖျော်ရည်ကိုပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။)
တစ်ပတ်တွင်သစ်သီးသစ်တစ်မျိုးသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသစ်များဝယ်ယူရန်ကြိုးစားပါ. ရှင်သန်နေသောဘဝစတိုးဆိုင်တွင်အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များရှိသည်, ၎င်းကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ၊ ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ဤဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာပါ. သင်သည်ဤနည်းကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်အစားအစာနှင့်သရေစာအသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်.
ပိုပြီးရိုးရာမုန့်အစားသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူရေစာ. မုန်လာဥတုတ်, သခွားသီးချပ်, ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး, ပန်းသီးနှင့်စပျစ်သီးများသည်အရသာရှိပြီးသယ်ဆောင်နိုင်သောမုန်ဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည့်ကျန်းမာသောဝက်အူချောင်းများကိုပင်အသုံးပြုတတ်ရန်သင်သင်ယူနိုင်သည်, ဒိန်ခဲဆော့စ်လိုပဲ, နှင့်ကြက်သား bullion. ပြီးတော့သင်သည်ကွတ်ကီးများသို့မဟုတ်ကျစ်ပလစ်များအစားကညွတ်သို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဲ့သို့သောသစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအသုံးပြုရန်သင်ယူနိုင်သည်.
သင်၏အသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားသုံးရန်လွယ်ကူသည်. ရှေ့ဆက်ရန်ပြင်ဆင်, အစားအစာစီစဉ်ပါ, သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားရန်နည်းလမ်းသစ်များကိုရှာဖွေပါ, နှင့်သင်၏အစားအစာကိုအမျိုးမျိုးထည့်ခြင်းကကျေနပ်အားရမှုကိုခံစားရစေပြီးသင့်ကိုကျန်းမာစေပါသည်. Thrive ဘဝ၏ထုတ်ကုန်များစွာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်. သူတို့ကလွန်းလွန်းစစ်မှန်သောအရသာ.